I-15 yeyona midlalo yeqhinga ye-android kunye ne-ios
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Iimidlalo ezili-15 ezilungileyo kakhulu ze-Android kunye ne-iOS
Iimidlalo ezili-15 ezilungileyo kakhulu ze-Android kunye ne-iOS
Ngaba udiniwe ngamatye angenangqondo atyumza kunye nokuntywila kweentaka? Ewe, namhlanje sinemidlalo emininzi eya kuthi isebenzise ngcono ingqondo yakho ngexesha leseshoni yakho elandelayo yokudlala. Isicwangciso-qhinga semidlalo yeqonga kubandakanya izihloko ezithandekayo kumdlalo wokudlala kwaye unokuhlala ufumana olungele incasa yakho. Masikhe singene ngaphakathi kuyo!
# 1 iRoma: Imfazwe iyonke-Uhlaselo lweBarbarian
Ixabiso: $ 4.99
Imfazwe iyonke yenye yezona ndlela zaziwayo zomdlalo weqhinga kunye nabalandeli bomdlalo banokonwabela umdlalo oqhelekileyo kwiifowuni zabo ngaphandle kokubingelela kakhulu. Ewe, umboniso omncinci wenza ukubeka imikhosi yakho kwibala lomlo kube nzima ngakumbi, kodwa ayisiyiyo loo nto umphathi wamava ongenakujongana nayo.
Umdlalo uya kukuxabisa iirandi ezintlanu kodwa kumgangatho kunye nobunzulu bomdlalo owufumanayo, kufanelekile ngexabiso.
Khuphela: I-Android : ios
# 2 Khulisa uBukhosi: iRoma
Omnye umdlalo weqhinga laseRoma, kodwa le ayisiyasimahla kuphela kodwa ikwakhanya ngakumbi ngentliziyo kunye nemiboniso yayo yekhathuni. Umdlalo weqonga ungachazwa ngcono njengendibanisela yokhuselo lwenqaba kunye netyala lenqaba. Kuya kufuneka ukhusele ikomkhulu lakho kubahlaseli kodwa unokoyisa nezinye iidolophu ukuze ufumane izixhobo ezingaphezulu.
Ngelishwa, njengakunye neminye imidlalo yasimahla yeselfowuni, kukho ezinye iimali zeprimiyamu ezichaphazelekayo ezinokuthengwa ngemali yokwenyani, kodwa nangaphandle kwazo, uya kuba nakho ukukhula kancinci kubukhosi bakho.
# 3 Impucuko VI
Ixabiso: $ 19.99
Elinye igama elaziwayo kuhlobo lwesicwangciso. Njengesiqhelo, uqala ngedolophu encinci, amawaka eminyaka ngaphambi kukaKrestu, kwaye usete uhambo ukuya kwiminyaka de wakhe i-megapolis yanamhlanje. Umdlalo unokuba nzima kakhulu kumdlalo oqhelekileyo kodwa abalandeli be-franchise bayakuvuyela ukubona ukuba inguqulelo yeselfowuni isondele kangangoko kwi-desktop yayo eyahlukileyo. Ukuba ufumanisa ukuba uneeyure zokubulala, impucuko VI iya kubenza badlule emoyeni.
Ukuba awuqinisekanga ukuba lo mdlalo uyindebe yakho yeti, ungadlala ukujika okungama-60 simahla ngaphambi kokuthatha isigqibo sokuba uyafuna ukuthenga umdlalo uphela okanye hayi. Ngelishwa, i-Civ 6 yi-iOS kuphela okwangoku.
# 4 Umphathi-mkhosi: Uhlaselo olunamandla
Umphathi-mkhosi ubekwe kwindawo yanamhlanje apho ujongene nokugqiba imisebenzi eyahlukeneyo ngomkhosi wakho weengcali ezikhethekileyo. Ungaqeqesha iiyunithi, uthenge kwaye uhlaziye izithuthi, kwaye wandise isiseko sakho. Imizobo iyi-retro encinci kodwa umdlalo uyonwabisa nangona kunjalo.
# 5 Ubudala be-Ottoman
Ukuthetha ngemizobo, Ubudala be-Ottoman abuyi kukuonwabisa ngembonakalo zayo ubuncinci zibonelela ngokuzonwabisa okuninzi kudityaniswe nelizwi elibambeleyo. Umdlalo ulungile apho ubala khona, amadabi lawo. Awuyi kubona amakhulu eeyunithi ezihamba ngokulandelelana, endaweni yoko, amajoni akho ambalwa athembekileyo kuya kufuneka asetyenziswe ngokugqibeleleyo ukuze agqibe umsebenzi osondele.
# 6 Ukuvela kweTatans: Umdlalo weQhinga
Ukusa kweTitans kukwelinye icala lesiphelo xa kuthelekiswa nobudala be-Ottoman. Imizobo inomtsalane kwitayitile ye-smartphone kwaye ayisiyiyo kuphela ukuba ulawula imikhosi yeeyunithi, kodwa unetitan kwicala lakho, enezixhobo ezizodwa kunye nezakhono. Zininzi iinkalo kulo mdlalo, kubandakanya ukuphuhlisa idolophu yakho kunye nokugcina iso kwabanye abadlali abakufuphi kuwe.
# 7 Iidomi
I-DomiNations ngumdlalo omnandi okhangeleka ulandela umxholo oqhelekileyo. Uyakha idolophu yakho, uthumele imikhosi ukuba itshabalalise kwaye iphange ezinye iidolophu ukuze uqeqeshe amajoni amaninzi, uhlaziye izakhiwo kunye nokuvula zonke iintlobo zezinto ezintle. Unolawulo ngakumbi kumadabi kunesiqhelo kolu hlobo lomdlalo, ke ngokuqinisekileyo kukho ubuchule obuthile obubandakanyekayo. Lo mdlalo awugcini nje ngokulinda ixesha elaneleyo ukuze ukwazi ukufumana izixhobo ezifanelekileyo kwizinto ofuna ukuzenza.
Ixabiso: $ 0.99
IMechCom 3 sisicwangciso sexesha-lokwenyani kunye noyilo olwenziwe lula kunye nomdlalo wokudlala okhumbuza i-StarCraft. Uqokelela izixhobo, wakhe iifektri kunye neeyunithi kwaye uzame ukugqitha kumchasi wakho we-AI owenza okufanayo kwenye indawo emephini. Ukusuka kwiiyunithi zokuphatha izinto ezincinci ukuya ekukhetheni imithi yeetekhnoloji, lo mdlalo ubonelela ngayo yonke into onokuyilindela kwiRTS. Elona candelo lililo kukuba ngaphandle kokubiza idola kuphela, lo mdlalo awunazintengiso okanye ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo.
# 9 Imikhosi yentsimbi
Omnye umdlalo ophefumlelweyo we-StarCraft we-RTS onemifanekiso epholileyo ekhangeleka. Iphulo eliphambili libonelela ngemishini engama-21 eya isiba nzima ngokuthe kratya kwaye icelomngeni ngakumbi. Umdlalo uya kufuna ukuba uze nezicwangciso zokuyila ukuba ufuna ukugqiba wonke umxholo okhoyo. I-Iron Marines iya kukubonelela ngeeyure ezininzi zokudlala umdlalo kwaye ababhekisi phambili baqhubeka nokwenza inkqubela kuwo.
# 10 iziCwangciso zokulwa
I-BattlePlans ikusa kwilizwe eliyintsomi eliyilwe kakuhle apho ulwela ulawulo lweziqithi, unqumla phakathi kwabo emqolo weemfudo ezinkulu. Uhlanganisa amaqela akho, ukhethe indawo oya kuyo ukuze woyise kwaye uzimisele ukutshabalalisa ukhuselo lotshaba. Emva koko kuza elona candelo lilungileyo, ukufumana impango kunye nokuthatha isigqibo malunga nendlela ofuna ukuyisebenzisa.
Njengoko uqhubeka, amadabi aya kuba ngumceli mngeni kwaye uloyiso lube nzima ukulufikelela, kungoko kungcono ukuba ube smart malunga nendlela ophuhlisa ngayo umkhosi wakho!
# 11 iBadland Brawl
I-Badland Brawl isolula inkcazo yemidlalo yeqhinga kancinci kodwa kumnandi ukuyidlala ngoko sayiphosa kukhetho ngokunjalo. Sebenzisa indibaniselwano yezixhobo kunye neeyunithi iinjongo zakho kukutshabalalisa inqaba yomchasi wakho ngaphambi kokuba enze okufanayo nakwakho. Ukuphuculwa kunye neembumbulu kunokufunyanwa ngokuvula amaqanda (ngokukodwa iibhokisi zokuphanga). Ngelixa umdlalo unengcinga elula, kuya kufuneka ukhawuleze kwaye uchane ngokuhamba kwakho kwaye ube nesicwangciso esomeleleyo esilungiselelwe kwangaphambili ukuba ufuna ukuzisa intshabalalo ngempumelelo.
# 12 Isibetho Inc.
Ixabiso: Simahla kwi-Android, $ 0.99 kwi-iOS
Ukugula kwehlabathi elihle, elinemibala kunye nomculo oqhubela phambili ohamba nayo yonke into oyenzayo? Ewe, isibetho Inc. sisichasi esivela kuyo yonke loo nto. Injongo yakho ilula: bulala wonke umntu emhlabeni. Njani? Ngokudala esona sifo sibulalayo. Ngazo zonke iintlobo zeentsholongwane kunye notshintsho olufumanekayo, ukuzisa ukufa ebantwini kwihlabathi liphela kuyonwabisa ngakumbi kunokuba ubucinga.
# 13 Ukhuselo lweNqaba yoKhuselo
Njengoko kucaca gca kwigama, i-Incursion Tower Defense yinxalenye yohlobo oluqhelekileyo lokuzikhusela kwinqaba. Ngaphandle kokubeka nje iinqaba kwaye ulinde ukubona ukuba kuzakwenzeka ntoni, nangona kunjalo, uya kuyalela umlinganiswa wakho ophambili kunye nenjana yakhe ethembekileyo, ecaleni kwezinye iiyunithi ezinokuhamba kwimephu kwaye zincede kwipiniki. Amanqanaba ahlukeneyo kwaye ayilelwe kakuhle ke kufanele ukuba kube nzima ukudikwa.
# 14 i-Auto Chess
I-Auto Chess yaqhuma ngokuthandwa ngo-2019 kwaye kwimpumelelo yayo kwavela uhlobo olutsha lwemidlalo yeqhinga. Ngokwenza indibaniselwano yamagorha kunye nokwakheka kwaye uzibeke kwiklasikhi yesi-8 enesi-8, ulwa nomnye wabachasi bakho abasi-7 kumjikelo ngamnye. Kulapho inxenye 'yemoto' ingena, njengoko iiyunithi zilwa zodwa de kube kuphela amalungu eqela elinye ahleliyo. Ewe kunjalo, kukho ithamsanqa elibandakanyekayo kodwa iqhinga lomdlali ngamnye lelo liya kuthi ekugqibeleni lizise impumelelo okanye ukusilela.
# 15 i-Dota Underlords
NjengoDota wayeqala ukuba yimowudi yeWarcraft 3, ngokunjalo ne-Auto Chess yenziwe njengemodeli yeDota 2 ekuqaleni. Nje ukuba abaphuhlisi benze i-Auto Chess ezimeleyo, iValve yakhawuleza yenza i-Dota Underlords. Imidlalo iyafana kodwa iValve izise amanqaku awodwa kwii-Underlords kwaye kunjalo, isebenzisa amaqhawe aqhelekileyo kunye nezakhono ezivela kwi-Dota 2.
Zombini i-Dota Underlords kunye ne-Auto Chess zithandwa kakhulu ngoku ukuze abaphikisi bafumane lula kwaye imidlalo yakho iya kuqala ngaphandle kokulibazisa.
t Iapile yokubukela isicwangciso seselfowuni
I-iphone se 2020 yobomi bebhetri
Ukuqhuma eNashville kukhokelela ekucinyweni kwe-AT & T & apos; s inkonzo engenazingcingo kwizixeko nakwimimandla eliqela
Eyona nto intle ngeApple iPad (2020) yesivumelwano esimnyama sangoLwesihlanu ngoku ivulelekile kubo bonke
Uhlaziyo lwe-Apple Music luzisa izixhobo ze-iOS 14 kwizixhobo ze-Android
Ukuvuza kutyhila izinto ezintsha ezinamahemuhemu okuba 'Ndifumane uMntu' kwi-iOS 14
I-iPad WiFi vs iPad Cellular: yeyiphi oyifunayo?
Eyona ndawo ithengiweyo yokuthenga kufutshane nesoyikiso se-coronavirus, iiyure zomsebenzi ziya kuhlawulwa
Eyona nto ikhuselekileyo kwi-iPad Air 4 yesikrini